पाठकले लगाए यस्तो आरोप : लोकतन्त्रमाथि सबै भन्दा बढि प्रहार नेपाली कांग्रेसले गरेको छ ! – ebaglung.com
२०७४ कार्तिक १८, शनिबार २०:३३	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
अर्जुन शर्मा, बागलुङ २०७४ कात्तिक १८ । बाम गठबन्धनको तर्फबाट बागलुङ क्षेत्र न. १ प्रतिनिधि सभा सदस्यको उमेदवार सूर्य पाठकले लोकतन्त्रमाथि सबै भन्दा बढि प्रहार नेपाली कांग्रेसले गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले जैदीमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै इतिहासको घट्ना क्रमलाई हेर्दा लोकतन्त्र माथि सबै भन्दा बढि प्रहार कांग्रेसले गरेको बताए ।
‘लोकतन्त्र राजाको हातमा बुझाउने नेपाली कांग्रेस नै हो, सायद अहिले राजा केही शक्तिशाली हुँदाहुन त देउवाले फेरी पनि लोकतन्त्र राजाकै हातमा थमाइदिन्थे पाठकको आरोप थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभाका उमेदवार कृष्ण थापाले नेपाली कांग्रेस जहिल्यै जनताको हित बिपरित लागेको आरोप लगाए । कांग्रेस ठग र दलालहरुको दलको रुपमा विकास भएकोले देशमा गुण्डागर्दी, अपारदर्शी र भ्रष्टचार मौलाएको थापाले बताए ।
कार्यक्रममा निबर्तमान सांसद मिना पुुनले नेपाली कांग्रेस बाम गठबन्धनबाट अतालिएर अनावश्यक प्रोपोगाण्डा गर्न सुरु गरेको बताएकी थिईन ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले प्रदेश न. ४ का सदस्य श्री प्रसाद शर्मा, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लाल बहादुर परियार, प्रदीप थापा, जैमिनी नगरका उपप्रमुख लिला राना, पैयुथन्थापाका वडा अध्यक्ष विरेन्द्र थापा राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला सदस्य थानेश्वर सुवेदीले बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा राक्तिम सांस्कृतिक अभियानका कलाकारले विभिन्न जनवादी गीत र नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा बागलुङका सह–सचिव डिलबहादुर दर्जीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत मंतव्य रुद्र शर्मा र सञ्चालन बद्री ढुङ्गानाले गरेका थिए ।